Ukuhlolwa Kwesiphequluli Esiphambanweni Kwenziwe Kulula | Martech Zone
NgoLwesihlanu, January 13, 2012 Douglas Karr
Uma ukuthuthukiswa kwewebhu noma ukwakheka kwewebhu, uyazi ukuthi omunye wemisebenzi ekhathaza kakhulu lapho uqeda idizayini enhle empeleni kuqinisekisa ukuthi kusebenza kuzo zonke iziphequluli. Akugcini lapho isiphequluli kanye nohlelo olusebenzayo lungathinta kakhulu indlela ikhasi elihumusha ngayo, kanjalo nama-plugins owasebenzisayo nawo!
Sethula isiza se- VA Loan Captain, othenge itimu kusuka enkampanini yangaphandle. Esikhundleni sokuzama ukuqagela ukuthi ngabe kuzosebenza kuzo zonke iziphequluli, amasistimu okusebenza namadivayisi, simane salayisha isethi ezenzakalelayo yezinqumo nezilungiselelo ku Ukuhlolwa Kwesiphequluli Esiphambanweni futhi badonsa izithombe-skrini ezibukhoma! Nawa amasampula ambalwa:
Isayithi lifaka nokuhlola kuqala kwethebhulethi neselula! Lapho usuwenzile izivivinyo ozifunayo, Ukuhlolwa Kwesiphequluli Esiphambanweni ikunikeza nge-URL ongabelana ngayo ngqo neklayenti lakho! Lokhu kuqinisekisa ukuthi iklayenti liqonda ngokugcwele ukuthi isiza sakhiwe ngaphesheya noma cha zonke iziphequluli ezidumile noma, esimweni senkinga ye-plugin, kusiza ukufakazela kubo ukuthi akukwenzi kwakho.
Intengo isuselwa kunombolo ye- imizuzu kuyadingeka ukuthatha isibhamu sokuhlola. Iphakethe lokuvula ngu $ 19.95 ngenyanga - vele uqiniseke ukuthi ukhawulela uhlu lwakho lokuhlola ukuze ungaphelelwa yimizuzu ngokushesha okukhulu. Ngenyanga yokuqala ngisebenzise insizakalo, ngikholwa ukuthi ngisebenzise i- ukuhlolwa okuzenzakalelayo futhi ngishise yonke imizuzu yami ezivivinyweni ezimbalwa ezibalwe inani elikhulu kakhulu le- amadivayisi, amasistimu okusebenza, iziphequluli kanye nezinqumo!
Ngaphansi kwama- $ 20 ngenyanga, lesi yisixazululo esihle esizovumela abaklami bakho ukuthi hlola kuyo yonke idivayisi. Uma uyinkampani, zizokuvumela futhi ukuthi ulandelele futhi uqinisekise ukwesekwa kwemiklamo yakho ngaphesheya zonke iziphequluli ezinkulu namadivayisi ngaphambi kokuthumela leyo nkokhelo yokugcina!
Tags: ukuhlolwa kwesiphequluliisiphambano isiphequluliukuhlolwa kwesiphequluli esinqamulelayo
Ukuguqula amakheli e-imeyili ku-Social Intelligence
Jun 19, 2013 ku-9: 16 PM
Ukuthuthukiswa okuhle kwe-Android namuhla!